Sonic အဆိုပါ Hedgehog ™ဂန္ထဝင် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Sonic အဆိုပါ Hedgehog ™ Classic
Sonic အဆိုပါ Hedgehog ™ဂန္ထဝင် APK ကို
ကအားလုံးကိုစတင်ခဲ့ကြောင်းအဆိုပါ Sonic ဂိမ်းယခုအခမဲ့-to-play စသည်နှင့်မိုဘိုင်း device များအတွက် optimized!
Sonic အဖြစ်ခုနစ်ခုဂန္ဇုန်အတွက် Hedgehog ဖြတ်ပြီးလျှပ်စီးအမြန်နှုန်းမှာပြိုင်ပွဲ။ Run နှင့်ကွင်းဆက်-de-ကွင်းမှတဆင့်လည်သင်ကွင်းကိုစုဆောင်းသကဲ့သို့ဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဒေါက်တာ Eggman ကနေကမ္ဘာကြီးကိုကယ်ဖို့သင့်ရဲ့မစ်ရှင်အပေါ်ရန်သူများကိုနှိမ်နင်း။
Sonic အဆိုပါ Hedgehog ဟာ SEGA ထာဝစဉ်ဂန္ဂိမ်းစုဆောင်းခြင်း, အခမဲ့ SEGA console ကိုဂန္တစ်ဦးရတနာသိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အမိုဘိုင်းပေါ်တွင်ဘဝမှယူဆောင်ပူးပေါင်းမည်!
- MOBILE Sonic အဆိုပါ Hedgehog အဆင့်မြှင့်တင်ထားပါတယ်ယခုပြိုင်ဘက်ကင်းစွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်ဂိမ်းရဲ့ဒဏ္ဍာရီတေးသံအပြည့်အဝထားပြီး re-ကျွမ်းကျင်ရာပူဇော်သက္ကာကိုချောမွေ့ 60FPS မှာမြင်ကွင်းကျယ်ဖန်သားပြင်ဖြင့်ပါဝင်သည်။
- ရမှာဖြစ်ပါတယ် Fast GO - တစ် All-အသစ်သောအချိန်တိုက်ခိုက်မှု mode ကိုနှင့်အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်မယ်!
- သစ်ဖွင့ ်. အက္ခရာပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Sonic ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကို Tails နှင့်လက်အဖြစ် Play ။ , ပျံသန်းဖို့၎င်းတို့၏ထူးခြားသောစွမ်းရည်ကိုသုံးပါကိုတက်များနှင့်စူးစမ်းလေ့လာဖို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာနည်းလမ်းအသစ်များကိုရာပူဇော်သက္ကာကိုအဆင့်ဆင့်န်းကျင်ငုပ်။
- Android ပေါ်မှာ control အတွက်အထောက်အပံ့ Sonic အဆိုပါ Hedgehog ပါဝါတစ်ဦးက Moga, Nyko, Xbox အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, HID နဲ့ controller များအတွက်သီးသန့်ထောက်ခံမှုပေးထားပါတယ်။
- Control ပံ့ပိုးမှုစင်တာ - HID သဟဇာတနဲ့ controller
- လစဉ်လတိုင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သောဂိမ်းများ - သူတို့အားလုံးကို Download!
- "ဟာဖောင်းပွယုံ - ဤသူသည်သင်တို့အစဉ်အဆက်မြင်ကြပြီမယ် tidiest, smoothest နှင့်အများဆုံးရတာဟာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ " [97%] - အန်ဒီစမစ်, SEGA ပါဝါ #22 (စက်တင်ဘာလ 1991)
- ", စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခြင်းမရှိဘဲခက်ခဲထပ်တလဲလဲဖြစ်ခြင်းမရှိပဲစွဲလမ်းနှင့်လုံးဝကစားရန်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းလည်း။ " [925 / 1000] - ဂယ်ရီ Whitta, ACE အား #47 (သြဂုတ်လ 1991)
- [92%] "အစဉ်အမြဲငါကစားခဲ့ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံး, Mega Drive ကိုဂိမ်းတစ်ခုမှာ" - Rich Leadbetter ဆိုလိုစက်များ #10 (ဇူလိုင်လ 1991)
- Sonic Jam Sonic ကဒီဇာတ်ကားမှာထပ်ပြန်လည်ရောက်ရှိတော်မူသောလှည့်ဖျား dash ပြောင်းရွှေ့, ပေးခဲ့သော Sonic အဆိုပါ Hedgehog ၏ပထမဦးဆုံးဖြန့်ချိပါရှိသော
- Sonic အဆိုပါ Hedgehog လည်း SEGA ရဲ့ Mega-Tech မှနှင့် Mega Play စစနစ်များအပေါ်အကြွေစေ့ကစားရုံအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်
- ယုန်နှင့် Armadillo ဇာတ်ကောင်တစ်ဦးဖြူကောင်ဒီဇိုင်းကိုအပေါ်ဖြေရှင်းမတိုင်မီ Sonic ဘို့စဉ်းစားခဲ့ကြ
- "Eggman" အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဒေါက်တာ Robotnik ရဲ့အမည်ပြောင်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, သူကအမြဲဂျပန်ထဲမှာ "Eggman" အဖြစ်လူသိများခဲ့ပြီး
Classic GAME အဖြစ်မှန်က
- ပထမဦးစွာဇွန်လ 23rd, 1991 အပေါ် US မှာဖြန့်ချိ
- ဒါဟာ Green Hill ဇုန်အက်ဥပဒေ 1 ဒီဇိုင်းအပြီးသတ်ဖို့နီးပါးတစ်နှစ် Yuji Naka ယူ
- နွေဦး Yard ဇုန်နှင့်ဦးနှောက်ဇုန်အပိုင်းအစမူလက sparkling ဇုန်နှင့်နာရီလုပ်ငန်းခွင်ဇုန်ဟုခေါ်ကြသည်
- အိပ်မက်များ၏ Masato Nakamura အားဖြင့်ရေးစပ်ဂီတစစ်မှန်သောကျော်ကြားမှုလာကြ
ဒီဂိမ်း "အကျိုးစီးပွားအခြေပြုကြော်ငြာ" တို့ပါဝင်သည်စေခြင်းငှါ, 13 အောက်မှာဖြစ်လူသိများအသုံးပြုသူများအတွက်ထက်အခြား (နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအဘို့အ http://www.sega.com/mprivacy#3IBADiscolure ကြည့်ရှုပါ) နှင့် "Precise တည်နေရာဒေတာများကို" စုဆောင်းစေခြင်းငှါ ( ) ပိုမိုသောအချက်အလက်များအဘို့အ http://www.sega.com/mprivacy#5LocationDataDisclosure ကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး
ACCESS_COARSE_LOCATION & ACCESS_FINE_LOCATION အောက်ပါခွင့်ပြုချက်သာသင်သင့်လျော်သောကြော်ငြာအားဝတျပွုသေချာစေရန်လိုအပ်သည်
© SEGA ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။ SEGA, အ SEGA လိုဂို, Sonic အဆိုပါ Hedgehog, SEGA ထာဝစဉ်ကို၎င်း, SEGA ထာဝစဉ်လိုဂို SEGA Holdings က Co. , Ltd သို့မဟုတ်ယင်း၏ affiliates ၏မှတ်ပုံတင်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်ကြသည်။
57.62 ကို MB
ဗိမာနျတျောရတနာ Hunt ကဂိမ်း
ဗိုလ်လုပွဲအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ 2R ...